RW Itoobiya ayaa lagu wadaa inuu booqasho rasmi ah ku tago dalka Kenya… – Hagaag.com
15 Janaayo 2021 in English // Dutch government resigns over childcare subsidies scandal…
15 Janaayo 2021 in English // Rare conviction of South Sudan soldiers for rape raises hope…
15 Janaayo 2021 in English // US rejects UN plea to reverse Yemen rebel terror designation…
15 Janaayo 2021 in English // ‘A woman was raped by 20 men; anyone could be the next victim’ – what life is like for women in Sudan…
15 Janaayo 2021 in National // Dowlad goboleedyada P/land iyo J/land ayaa lagu eedeeyey in aysan raalli ka aheyn in dalka…
RW Itoobiya ayaa lagu wadaa inuu booqasho rasmi ah ku tago dalka Kenya…
Posted on 8 Diseembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa booqan doona Kenya, maalinta berri oo Arbaco ah, waana booqasho rasmi ah oo qaadan doonta labo cisho.
Madaxtooyada Kenya ayaa shaacisay in Ra’iisul Wasaare Abiy uu imaan doono magaalada Moyale ee gobolka Marsabit oo ka mid ah gobolada xuduuda la leh Itoobiya.
Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku kulmi doona magaalada Mooyaale, waxaana labada hoggaamiyo ay xariga ka jari doonaan bar koontarool ku taala xuduuda labada dal.
Sidoo kale waxay kaloo booqan doonaan gobolka Lamu, iyagoo kormeeri doona mashruuca dhismaha Dekedda cusub ee Lamu, waxaana mashruucan adeegga dekedda cusub uu isku xiri doonaa Kenya, Suudaanta Koofureed iyo Itoobiya.
Booqashada Abiy ee Kenya ayaa ku soo beegmaysa xilli ay xukuumaddiisu soo gabagabeysay howlgal amni oo ka dhan ahaa Jabhadda TPLF, iyadoo dowladdu guulo ka sheegatay dagaalka ka socda waqooyiga Itoobiya ee Gobolka Tigray.
About Admin (12776 Articles)
Dutch government resigns over childcare subsidies scandal…
Rare conviction of South Sudan soldiers for rape raises hope…
US rejects UN plea to reverse Yemen rebel terror designation…
Lammaanaha caanka ah ee Kanye West iyo Kim Kardashian ayaa la sheegay in ay kala Tagayaan…